नयाँदिल्ली– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि भारतका अधिकांश मन्त्रीले आफ्नो उपचारका लागि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रोज्छन् । तर अनौठो के छ भने उनीहरुको रोजाईमा एम्सका सर्जन भने पर्दैनन्।
राजनीतिज्ञहरु एम्समा भर्ना भएपनि उपचार गर्न भने बाहिरबाट निजी सर्जन झिकाउँछन् । भारतभरका अधिकांश सर्जनहरु एम्सका सर्जनको उपचारविधि फलो गर्छन् । तर अति विशिष्ट भनिएका बिरामी (नेता तथा मन्त्री) लाई भने त्यही एम्सका डाक्टरप्रति विश्वास छैन।
एम्सका डाक्टरलाई यो गलत अभ्यास लाग्छ । तर विभिन्न खालका डर र दबाबका कारण कतै उजरी गर्दैनन्।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको बाइपास सर्जरीका लागि मुम्बईको एसियन हर्ट इन्सिच्युटबाट डा. रमाकान्त पान्डालाई ल्याइएपछि यस्तो अभ्यास सुरु भएको हो । त्यतिबेला एम्सका डाक्टरहरु यो अभ्यासप्रति असन्तुष्ट थिए।
कुरा त्यतिमा मात्र टुंगिएन । सन् २०१६ मा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि फोर्टिस अस्पतालका प्रत्यारोपण विभाग प्रमुख डा. मुकुट मिन्जलाई ल्याइयो । उनी आफूमात्र आएनन्, आफ्ना टीम नै ल्याए । हालै पनि वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अपोलो अस्पतालबाट डा सन्दीप गुलेरियालाई बोलाइयो।
स्रोतका अनुसार भर्ना एम्समा हुने र उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि बाहिरका डाक्टर ल्याउने अभ्यास अहिले सामान्य हुन थालेको छ । उनीहरु एम्समा भर्ना भएर भिआइपी सुविधा लिन्छन् । तर उपचारमा त्यहाँका डाक्टरलाई विश्वास गर्दैनन्।
तर पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीले भने आफ्नो घुँडाको सर्जरीका लागि निजी सर्जन नै रोजपनि एम्स आएनन्, मुम्बईको निजी अस्पतालमा उपचार गराए । अन्य भिआइपी बिरामीले भने त्यसो गरेनन्।